MediaLight iyo Lumadoodle: Farqiyadaha Muhiimka ah - Nalalka MediaLight eexda
MediaLight vs Lumadoodle: Farqiga Muhiimka ah
Hadda waxaan helay boggaaga. Waxaan ka imanayaa Lumadoodle aan waxyeelleeyey markii aan u soo guuray guri cusub. Ma jirtaa sabab ay nalalkaagu qaali uga yihiin? Sida oo kale ma i tusi kartaa xogta dhabta ah?
Waad ku mahadsantahay fariintaada fadlan iska cafi jawaab celinta. Waxaan helnaa su'aashaas wax badan. Waxaan badanaa ku jawaabaa su'aal aniga ii gaar ah:
Miyaad lacag keydinaysaa haddii aad soo iibsato alaab aan qaban wixii loogu tala galay inay qabato?
Waxaan sameynaa nalalka khiyaamada ka raqiisan ee qiimahoodu qiyaas ahaan la mid yahay Lumadoodle, halka aan bixinayno saxsanaanta heerka xirfadeed, dammaanad qaad dheer iyo xulashooyin isku xirnaan badan.
Marka, haddii aad raadineyso inaad isbarbardhig ku habboon sameyso, waxaan isbarbar dhigi lahaa MediaLight midka cusub LX1 Nalalka Laydhka isla kooxdii MediaLight.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ka mid ah samaynta iftiinka saxda ah ee saxda ah marka loo eego qaadashada 'CRI low' (oo kaliya 75 Ra) oo xarig ah oo loo yaqaan 'LED strip', "ka saarista tuubada balaastigga ah oo dhabarka saareysa dhejis," sida Lumadoodle jeclaan lahayd inaad aaminto.
Haddii aadan rabin inaad si xun u saameyn ku yeelato sawirka TV-ga, markaa waxaa jira heerar loogu talagalay CRI (Index Saamaynta Midabka), isugeyn iyo awood qaybsi muuqaal ah oo iftiinka deegaanka ah oo ay tahay in la raaco.
Shirkadeenu waxay qaadatay mudo toddobo sano ah hagaajinta saxnaanta iyo astaamaha badeecadaheena halka tooda aysan hagaagsaneyn haba yaraatee, waana ognahay inay wali jirto meel loo hagaajin karo, waana sababta aan marwalba uga shaqeynayno soo noqoshada soo socota. Tani waa sababta badeecadaha MediaLight ay u adeegsadaan xirfadlayaal fiidiyoow gebi ahaanba istuudiyaha kasta iyo xarumaha wax soo saarka boostada.
Si kastaba ha noqotee, waxa aan raacsanayn Lumadoodle, Govee, Antec, Zabiki ama qof kasta oo kale .. Hase yeeshe, waxa soo socda ayaa ka fogaanaya fikradda wuxuuna diiradda saarayaa xogta muuqaalka muuqaalka iyo qaabeynta muuqaalka.
Laakiin, dib ugu noqo su'aashaada. Waxaan rabay inaan awoodo inaan diro jawaab dhameystiran dhabta ah xogta, markaa waxaan kaliya dalbaday unug cusub oo Lumadoodle ah waxaanan ku cabbiray Sekonic C7000 hoostiisa.
Marka hore, aan ka qaadno xariijimaha ku jira baakidhkooda oo aan eegno Lumadoodle ee ku xigta MediaLight. Waxa ugu horreeya ee aad ogaan doontid waa in MediaLight ay leedahay Laydh badan. Xaraashka 5m Lumadoodle wuxuu leeyahay 90 Laydh. MediaLight oo isku dherer ah wuxuu leeyahay 150 Laydh. Waxaa jira LEDs dheeraad ah 66.66% on MediaLight mitirkiiba.
Isbarbar dhiga Lumadoodle iyo MediaLight
Chips-ka ku jira 'MediaLight' wuxuu ku kici doonaa 66% in ka badan oo ku saleysan tirada LED-ka kaligiis xitaa haddii wax soo saarkoodu hooseeyo, saxnaanta sare ee SMD Chips-ka wax badan kuma kharash gaarin soo-saaristeeda. Xaqiiqdu waa, iyagu waa ku kacaan ugu yaraan 20 jeer ka badan halkii LED.
Isbarbar dhiga midab nalka Nalka Tayada
Marka hore, aan idhaahdo tani maahan isbarbardhig tufaax-iyo-tufaax ah.
MediaLight waxaa loogu talagalay in lagu sawiro xirfadlayaal saynis iyo Lumadoodle maaha. MediaLight waxaa ku jira cajalado Colorgrade Mk2 ah iyo Lumadoodle ma leh. Taasi ma ahan in la garaaco dadka ka shaqeeya halkaas, maadaama ay yihiin dad aad u fiican, kaliya ma tixgelinayaan tayada muuqaalka marka ay dhisayaan alaabtooda oo aad ayey daacad uga yihiin. Waxaan ka doorbideynaa tan shirkadaha sidoo kale iibinaya LED-yada tayada hooseeya laakiin sheeganaya inay sax yihiin.
Waxaan tijaabiyey Lumadoodle dhawr sano ka hor waxaanan u qaatay, sida teknoolojiyad badan, in wixii intaas ka dambeeyey ay jiri lahaayeen horumar soo kordha. Dhab ahaan, CRI (muujinta midab bixinta) weli aad ayuu u hooseeyaa inkasta oo teknolojiyada LED-ka ay si aad ah u horumareen 5-tii sano ee la soo dhaafay.
Lumadoodle Tilmaamaha Bixinta Midabka (CRI) = 76.3 Ra (yaraanta)
Tusmada Bixinta Midab MediaLight (CRI) ≥ 98 Ra
Taa bedelkeeda, kii ugu horreeyay (imtixaanka ka dambeeya beta) MediaLight oo la iibiyay 2015 wuxuu soo bandhigay CRI 91 (hadda 98-99 Ra). Laakiin, xitaa MediaLight ee 2015 wuxuu lahaa CRI aad uga sarreeya Lumadoodle-ka maanta.
Xadhiga cusub ayaa laga cabiray ka diirkii hore taas oo aad wali ku arki karto cabirkeyga halkan ka 2017, laakiin wali macquul ahaan ku dhow CCT-da la xayaysiiyay ee 6000K (oo ka soo horjeeda heerka tixraaca 6500K).
Maxaan uga jeedaa macquul ahaan xidho?
Dunida iftiiminta eexdu waa Galbeedka Duurjoogta. Waxaa jira heerar warshadeed oo aad u adag, laakiin in yar ayaa umuuqda inay raacaan.
Waxaan u soo gudbineynaa alaabteena si aan u xaqiijino shahaadada ISF, halka shirkadaha badankood ay si fudud "6500K" ugu daabacaan xirmada, ama "cad cad", ama "caddaan run ah." Mar baan iibsaday mid ka mid ah si aan u tijaabiyo oo ku qoran "cad faraxsan" baakadka. 😁
Laba ka mid ah dambiilayaasha ugu xun, in kasta oo ay ahaayeen Vansky iyo Antec. Waxay ahaayeen kuwo aad u xun oo dhab ahaantii waxyeello u geysteen iyaga. Haddii aad waligaa ku dhex lugaysay jaranjaro ama meel gawaarida la dhigto oo leh shidan, nalal qalafsan, waad ogtahay waxaan ula jeedo.
Nalalka Vansky eexda sheegatay heerkul midabkiisu yahay 6500K bogooda internetka laakiin lagu qiyaasay ku dhowaad 20,000K
Laydhka Antec eexda ayaa sheegay in laydhadhkoodu "si sax ah loogu hagaajiyay 6500K" boggooda laakiin iyagu lagu qiyaasay 54,000K. Uma soconeyno sonkorta, waxay ahaayeen kuwo cabsi badan.
Isku soo koobida hordhaca, Zabiki iyo Laydhka Halo Eex sidoo kale aad ayey ugu jahwareerayeen naftooda, laakiin, nasiib wanaag, horey ayey uga baxeen meheradda, sidaa darteed maahan inaan dib u eego iyaga mar dambe.
Marka, jawaabta oo kooban ayaa ah inay ku kacayso kharash badan dhisida MediaLight sababtuna ay tahay in ay jiraan Laydh badan, kuwaas oo iyagu iyagu tayo sare leh - oo loo dhisay in lagu saleeyo "heerarka tixraaca," oo lagu daray farabadan qaybaha kale ee aad u baahan tahay inaad ka sameysid xariga iftiinka si buuxda u shaqeeya eexda:
CRI ee ≥98 halkii aad ka noqon lahayd 76 (nalalka eexda waa inay ahaadaan uguyaraan 90)
Dulqaadka adkeynta binning (inta udhaxeysa 50K ee 6500K)
Dhismaha PCB naxaas saafi ah
Waxyaabo badan oo dheeri ah oo aad u baahan laheyd inaad si gooni ah ula iibsato nalalka kale (Ie gaabiyo iyo fog, adabtarada, toggle on / off, xarigga fidinta, clips router clips).
Miyaan sheegay 66.66% LEDs ka badan xariiq kasta?
I ballanqaad in aan si dhakhso leh ugu soo galayo xogta sawir qaadista ceyrinta ah. Laakiin kahor intaanan sameyn, waxaa jira, qayb jahwareerineysa sumadda Lumadoodle oo jahwareer badan dhalisa, taas oo keenta emayllo badan iyo sheekooyin web-ka ah oo ay ila yeeshaan.
Ma aanan tijaabin Lumadoodle Pro maxaa yeelay haddii ay ku faraxsan yihiin inay daabacaan muxaadaro xitaa ka xun nalalka cadcad, taas ayaa igu filan. Sikastaba, hadaad wax uun kabarto emaylkan: "Nalalka midab beddelka eexashada iyo midabkaba midabku iskama qasmayo
Dhammaan xargaha 'MediaLight' waxaa loo ekeysiiyaa D65 cad. Midabbada ma beddelaan.
Sidaa darteed, isbarbardhiggeennu wuxuu u dhexeeyaa MediaLight Mk2 iyo kan cad ee Lumadoodle.
Waa tan xogta cayriin ee qaabka .csv loogu talagalay cabbiraadda labada khaanadood ee fudud oo lagu qaaday Sekonic C7000 oo kaarka 18% kaar cawlan ku leh qolka lagu rinjiyeeyey rinjiga Munsell N8. (Waxaa laga yaabaa inaad ku aragtay qaybtayada isdhexgalka ee bogagga kale. Waxaan u isticmaalnaa taas inaan ku tijaabino leydhka shakhsiga ah, nalalka iyo madaxa laambadaha, oo aan ahayn xariijimo la soo uruuriyay)
Cabbiraadaha kor ku xusan waxaa lagu qaaday 1m oo dherer ah LED strips.
Isbarbar dhiga Muuqaalada MediaLight iyo Lumadoodle
MediaLight waxaa ku jira iftiin. Lumadoodle kuma jiraan halbeeg cabirkooda moodeelkooda cad (eexashada nalka waa inuu ahaadaa D65 cad, marka tan waa tan aan isbarbar dhigeyno), laakiin waxaad ku iibsan kartaa mid qiyaastii $ 12
MediaLight waxaa kujira shidida / daminta. Lumadoodle ma. Haddii dekedda USB-ga ee TV-gaaga uusan damin TV-ga, waxaa lagu farayaa inaad ka furatid.
MediaLight's dimmer iyo Remote wuxuu la shaqeeyaa Harmony remote ama IR universal remotes, Lumadoodle kuma jiraan cabir isla markaana cutubka iibka ah ma ahan iswaafajin ama isgaarsiinta caalamiga ah ee IR.
MediaLight waxay u isticmaashaa PCB naxaas saafi ah (alloy-immersed) waxqabadka sare iyo awoodaha kuleylka kuleylka, Lumadoodle ma adeegsato.
MediaLight waxaa kujira adapter (Waqooyiga Ameerika kaliya), Lumadoodle kuma daro.
MediaLight waxaa kujira 5 Sano oo Dammaanad ah, iyo Dammaanadda Lumadoodle waa 1 sano.
MediaLight ma beddelo midabada Lumadoodle waxay sameysaa moodel leh midabbo kala duwan. Haddii aad rabto inaad beddesho midabada, Lumadoodle ayaa ka fiican xulashada. Si kastaba ha noqotee, nalalka beddelaya midabku wuxuu si xun u saameeyaa sawirka shaashadda ee muuqaalka midab-xasaasiga ah. Natiijo ahaan, MediaLight ma bixiso iyaga.
MediaLight waxaa lagu caddeeyay saxnaanta Imtixaanka Sayniska Sawirka waxaana loogu talagalay inay dhaafto SMPTE heerarka loogu talagalay iftiinka deegaanka ee loogu talagalay midabada jawiga fiidiyowga ee muhiimka ah. Lumadoodle ayaa si macquul ah ugu dhow iyaga bartilmaameedyada la sheegay ee 6000K iyo 76 Ra, laakiin kuwani maahan heerar tixraac.
Laydhka 'MediaLight LEDs' waxaa loo ekeysiiyaa D65 (6500K oo leh ofuv of .003 - the Vuv ee qorraxda dib loo habeeyay, iyadoo la waafajinayo heerka iftiinka CIE ee loo yaqaan 'D65' oo leh tusmada midab aad u sareysa (CRI) ee Ra 98 Ra. Isuduwayaasha chromaticity-ka waxay si aad ah ugu dhawyihiin x = 0.3127, y = 0.329 istaandarka.
Lumadoodle waxay xayeysiisaa heerkulka hoose ee 6000K (bogagga qaarkood) cabirkeenna ayaa tan muujinaya. Waxay ka diirran yihiin 6500K (qiyaastii 5600K tusaalaha). Tusmada muujinta midabka Lumadoodle ee 76 ayaa ka hooseysa kan SMPTE-lagu taliyay qiimaha ugu yar ee 90 Ra.
Ujeeddo ahaan, nalalka sare ee CRI ayaa ka saxsan kan nalalka hooseeya ee CRI, 76-na waxay ka hooseysaa marinka u-soo-baxa sawirka saxda ah.
MediaLight waxay leedahay qiime R9 (casaan qoto dheer) oo ah ≥ 97. Lumadoodle waxay leedahay qiime R9 xun. Tani waxay ka dhigan tahay in Lumadoodle uusan lahayn casaan qoto dheer oo muuqaalkeeda ah, ugu yaraan aan u dhigmin midabada kale ee muuqaalka.
Iftiin casaan (R9) qoto dheer ayaa muhiim u ah maqaarka maqaarka saxda ah sababtoo ah socodka dhiigga ee maqaarkayaga hoostiisa. (Tani waxay ku xiran tahay xitaa iyadoo la soo bandhigayo, inkasta oo saameynta la rogay). Waxay kaloo sharraxaysaa sababta ay nalalku u yeeshaan cagaaran / buluug ah marka la barbar dhigo nalalka sare ee CRI. Iftiinka wuxuu ka kooban yahay buluug iyo jaalle sare.
Qaybinta Awooda Muuqaalka iyo CRI ee MediaLight Mk2
Qaybinta Awoodda Muuqaalka ah iyo CRI ee Lumadoodle
Waxay caqabad ku noqon kartaa in la muujiyo farqiga u dhexeeya awood qaybsiga muuqaalka ee laba ilo iftiin ah, sidaa darteed waanu iskudubayn doonaa garaafyada. Qeybinta awoodda muuqaalka ee Lumadoodle waxaa lagu dhajiyay MediaLight Mk2 hortiisa. Lumadoodle wuxuu u muuqdaa mid cad oo tarjumaya oo leh xuduud madow iyo MediaLight Mk2 wuxuu u muuqdaa midab.
Waxaan aragnaa in Lumadoodle uu abuurayo caddaan iyadoo la isku darayo fosfoorasyada huruudda ah (fosfoorasyada leh dherer dhererkoodu yahay 580 nm) oo leh buluug emitter ah. Ma jiro heer sare oo cas ama cagaar ah oo ku jira muunadda Lumadoodle (waxaad samayn kartaa iftiin yar oo CRI ah adigoo isku daraya laba midab oo iftiin ah - jaalle iyo buluug).
Waxaad arki kartaa dusha sare ee cagaarka iyo casaanka ee loo yaqaan 'MediaLight Mk2' iyo midabada si geesinimo leh ugu muuqda garaafka oo matalaya midabada ka maqan muuqaalka Lumadoodle. Caddaanka "buurta dusheeda" waxay u taagan tahay heerka ugu sarreeya ee tamarta fosfoorasyada huruudda ah ee Lumadoodle.
'MediaLight' kuma jiro ugu sarreysa jaalle ah iyadoo isku darka fosfoorasyada casaanka iyo cagaarka ah ee ballaaran iyo cidhiidhi ah lagu daro buluug emitter si loo siiyo MediaLight Mk2 SPD qaab u dhow D65, ama "loo ekeysiiyey D65."
In kasta oo isbarbardhigani uu ka imanayo tartankooda, si ka duwan alaabada qaar ee suuqa taal, Lumadoodle ma sheeganayso in loogu talagalay saxsanaanta, qiimuhuna wuu ka hooseeyaa qiimaha MediaLight, in kasta oo aanu daruuri ka hooseyn badeecadaha la midka ah ee loo yaqaan 'LED strips'. Tan uga soo horjeed tan shirkadaha ballan qaada wax ka badan inta ay keenaan. Waxay ballan qaadayaan CRI ee 76 waana taas waxa aad hesho.
Qiimaha runtii waa qodob waana xitaa nalalka eexda ugufiican kuma badbaadin doono TV xun oo leh goobo qaldan.
Waxaan door bidnay inaanan ka iibin dadka aan u baahnayn ama doonaya saxsanaanta. Waxaa jira dad badan oo si toos ah TV-yada tooska ugala baxa sanduuqa marka loo eego inay jiraan dad miisaamaya bandhigyadooda.
Waxaan rajeyneynaa, si kastaba ha noqotee, inaan soo bandhignay sababta wax soo saarkeennu ugu qaalisan yahay soosaarka si aad go'aan uga gaarto badeecada adiga kugu habboon.
Waa kuwan aasaasayaashii Lumadoodle iyaga oo ka hadlaya waxyaabaha laydhka eexda iyo sida ay diiradda u saarayaan. Tani maahan wax aan caadi ahayn. Inta badan LED-yada loo iibiyo sida nal eexda ayaa ah badeecooyin loo yaqaan 'LED strips' oo loogu talagalay ujeedooyin badan, sida nalalka teendhada.
Nalalkayagu waxay sameyn lahaayeen nalalka teendhooyinka laga cabsado, laakiin waa nalalka eexasho aan caadi ahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado aan saxnimadu wax badan ku fadhiyin, oo bixinta saxnaanta aysan u qalmin kharashka dheeriga ah. Waa inaadan waligaa iibsan wax ka kharash badan kan aad rabto inaad ku bixiso astaamaha aadan u baahnayn.
Haddii aad cabirto TV-gaaga, nalalka aan saxda ahayn si wax ku ool ah uga qiimee aragtida qofka daawanaya. Kala duwanaanshaha fikirka ah ee u dhexeeya chromaticity iyo midab bixinta ee MediaLight iyo Lumadoodle waa, xaaladaha intooda badan, aad uga sii ba'an kuwa isbeddelka ah ee aad ka dhigi doonto muujintaada, iyo tan iyo markii laydhadhku bixiyaan tixraaca dhibic cad oo muuqaal ah, isbeddello la dareemay heerkulka midabka iyo midabku wuxuu u dhigmaa farqigaas.
Haddii iftiinka jawiga ee jawiga daawadu uu aad u diiran yahay oo uu leeyahay Δuv aad u sarreeya, waxay u muuqan doontaa mid ka cagaaran kana diirran iftiinka D65 la simay. Natiijo ahaan, TV-ga wuxuu u ekaan doonaa magenta iyo qabow ka badan D65, xitaa marka la shaaciyey.
Xitaa iyada oo aan la helin farqiga saxda ah, waxaa jira waxyaabo kale oo aad rabto inaad ku darto Lumadoodle si aad uga dhigto isbarbardhig tufaax-ilaa tufaax ah oo ku saleysan sicirka, Waxyaabahan waxaa ka mid ah kontoroolka fog, cabbir (nalalka eexda ayaa loo maleynayaa inay waa in lagu dhejiyaa 10% ee iftiinka ugu badan ee muujinta, markaa waxaad u baahan tahay cabbir) Adapter AC, xadhig dheeri ah, cufnaan sare oo LED ah iyo muddo dammaanad qaad aad u dheer ah. Ku darista qalabka ayaa si aad ah u xireysa farqiga u dhexeeya qiimaha.
Kala iibsiga furaha ahi waa mid ka mid ah kharashka iyo saxsanaanta. Haddii aadan helin saxsanaanta aad u baahan tahay, waxaad u badan tahay inaad bixinayso lacag badan, in kasta oo qiimo ka hooseeya. Iyo, haddii aadan u baahnayn saxsanaanta, waxaa laga yaabaa inaad kaga fiicnaato badeecad jaban, halkii aad ka ahaan lahayd mid ka mid ah alaabooyinka dib loogu eegay boggan.
Taasi waxay ahayd isbarbardhig xiiso leh. Naladeehee aad jeceshahay inaad aragto marka xigta oo la cabiro?